ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း - မူလစာမျက်နှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ Abhisheka စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးမှာ $367,500 ကိုငါတို့စုဆောင်းပြီးပြီ။ ဆက်လုပ်ရအောင်။ 36.75% ရန်ပုံငွေ
Prabhupada ၏ TOVP သို့သ ၀ ဏ်လွှာအသစ်လက်ခံခြင်း OCTOBER 14 & 15 PRABHUPADA လာ! ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား ယနေ့စပွန်ဆာ 2022 ခုနှစ်တွင် Murti Installation ယနေ့ AN ABHISHEKA စပွန်ဆာ! Prabhupada Vaibhava Darshan Utsav
TOVP ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းစကား
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ISKCON မှသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအပေါ်မကြုံစဖူးလွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခြိမ်းခြောက်မှုကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါ။ ဤနေရာတွင် Sridhama Mayapur ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ကိုယ်ရေဘဝအတွက်သာမကဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူအားလုံး၏ကာကွယ်မှုအတွက်ပါဝိညာဉ်ရေးအတွက်ပါတိကျစွာတိုင်းတာသည်။
မှတ်ချက် - TOVP CARE COVID RELIEF အစီအစဉ်သည် ISKCON Mayapur နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘုရားကျောင်းများအတွက် Ambarisa prabhu ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် $25,000 လှူဒါန်းသည်။
Srila Prabhupada ၏ ၁၂၅ နှစ်မြောက်အသွင်အပြင်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုအောက်မေ့ရန် အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ် Shri Narendra Modi သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Srila Prabhupada ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်၊ TOVP ဆောက်လုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးရန်နှင့်အိန္ဒိယအစိုးရမှအထူးရှားပါးသောရှားပါးသောငွေဒင်္ဂါးပြားကို ၀ ယ်ရန်တစ်သက်တာ၌တစ်ကြိမ်သာအခွင့်အရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ ဤအခါသမယအားဂုဏ်ပြုရန်၊ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်များအတွက်သင်၏မိသားစုတွင်အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂ နှစ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှုရရှိနိုင်ပါသည်။
သူ၏ဆန္ဒပြည့်စုံအောင်ကူညီပါ။ ယေဟောဝါ၏ NRSIMHA ၏ကျေးကျွန်ပြီးမြောက်ရန်ကူညီခြင်း
ကမကထပြုသူ Nrsimha အုတ် ဒါမှမဟုတ်ပေးပါ အထွေထွေလှူဒါန်းမှု
တရားဝင် TOVP Grand Opening သို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့ တစ်ချိန်က -In-a- တစ်သက်တာဝိညာဉ်ရေးရာအခွင့်အလမ်း Lord Caitanya ၏အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက် adbhuta mandir ။
"ဒီဗိမာန်တော်ကို Sri Mayapur Candrodaya Mandir, Mayapur of Moonapur လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ လပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိတက်လာပြီးပိုကြီးလာအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ဒီလဟာကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားမှာပါ။ အိန္ဒိယတစ်ခွင်လုံးမှာသူတို့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ကြည့်ရှုလော့။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှလာကြလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး Blog & Stories များ
စက်တင်ဘာ 26, 2021 BY Sunanda Das
Indira Ekadasi နှင့် TOVP ၂၀၂၁
စက်တင်ဘာ 25, 2021 by Sunanda Das
စက်တင်ဘာ 22, 2021 by Sunanda Das
နှုံး ၁၇၊ ၂၀၂၁ by Sunanda Das
နောက်ထပ်ဖတ်ရန် Archive သို့သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင် ၂၃ မာရသွန်
အလွန်အမင်းသနားခြင်းကရုဏာနှင့်အရေးတကြီးအချိန်တွင် Srila Prabhupada က "ကျနော့်စိတ်ကူးကတော့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေကို Mayapur ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်သည်အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်လာပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် TOVP Grand Opening ၏တရားဝင်နေ့စွဲကိုအတိုချုံးကြေငြာရမည်။ ဤmonရာမစီမံကိန်းကြီးကိုဖွင့်လှစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နှစ်နှစ်ရှိသည်။ ဤအရာသည်ကမ္ဘာ၏သမိုင်းကြောင်းကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်များအားအနာဂတ်သို့ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဝိဇ္ဇာအမှောင်ထုကိုဖယ်ရှားပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို Krishna ဟိန္ဒူသတိထားမှု၏ရေကြီးတံခါးများကိုဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်သည်အနှစ်သာရ၏အရေးကြီးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Srila Prabhupada ၏ပျော်ရွှင်မှု၊ ဂုဏ်အသရေနှင့်အောင်ပွဲခံမှုကို TOVP ပြီးစီးအောင်သေချာစေရန်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအနေဖြင့်အတူတကွအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပြီးအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူပေးခဲ့သောထာဝရဆုကျေးဇူးအတွက်ကျေးဇူးတင်မှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Acharyas နှင့် Lord Gauranga ၏ Sridhama Mayapur ၏သန့်ရှင်းသောနေရာတွင်အမှုဆောင်ခြင်း၌ကောင်းချီးခံစားရပါလိမ့်မည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ကလီကတ္တားတွင်လူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဂီရိရာဂျာဆွာမီသည် Srila Prabhupada သို့ချဉ်း ကပ်၍“ မင်းရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ မင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေဖို့အရာနှစ်ခုကတော့မင်းစာအုပ်တွေဖြန့်ဝေပြီး Mayapur မှာဘုရားကျောင်းကြီးဆောက်တာပဲ။ ” Prabhupada ၏မျက်နှာသည်လင်းနေပြီးသူ၏မျက်လုံးများကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ကာသူပြုံးလိုက်သည်။
`ဟုတ်တယ်၊ မင်းနားလည်ပြီ you .... အကယ်၍ မင်းတို့အားလုံးဒီဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်၊ Srila Bhaktivinoda Thakura ကိုယ်တိုင်လာပြီးသင်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆီပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ '
TOVP မစ်ရှင် 23 မာရသွန်ရန်ပုံငွေရှာ
Srila Prabhupada ရဲ့အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်အတူတကွလုပ်နိုင်တယ်
အောက်ပါ TOVP ရန်ပုံငွေရှာသူများ ကိုယ်စားပြုတယ် အမှန်တကယ်ဝင်ငွေ နှင့် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည် TOVP ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့် (၂) ကိုပြီးစီးရန်နှင့် ၂၀၃၃ ခုနှစ်တွင် Gaur Purnima မှ Srila Prabhupada ကိုအပြီးသတ်စီမံကိန်းကိုအတူတကွကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်။ မီတာများကို 'Green Zone' တွင်ဆက်လက်ထားရှိရန်အားလုံးအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှန်တကယ် ၅ နှစ်ဘတ်ဂျက်သည် $50M ဖြစ်သော်လည်းရည်ညွှန်းထားသော $35M ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများထံမှရရှိရန်မျှော်လင့်သောအရာဖြစ်သည်။ "ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူအားလုံး၏လက်ဖြင့် Lord Caitanya ၏ဗိမာန်တော်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း"။ $15M ချိန်ခွင်လျှာကိုပညာရှိများထံမှရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လစဉ်ရည်မှန်းချက် - ၁TP2T800,000
နှစ်စဉ်ရည်မှန်းချက် - ၁TP2T10,000,000
5 နှစ်ရည်မှန်းချက်: $35,000,000
TOVP VIRTUAL Tour ဝဘ်ဆိုက်
၃၆၀ ဒီဂရီအပြန်အလှန်မြင်ကွင်းကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ဆက်မှုကိုကြိုဆိုပါ၏၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးဗိမာန်တော်ဖြစ်သော Vedic Planetarium (TOVP) ၏အနောက်ဘက်ဘင်္ဂလား / အိန္ဒိယအနောက်၊
အတွင်းနှင့် TOVP ဆောက်လုပ်ရေးနေရာမှမြေညီထပ်မှအမြင့်ဆုံးအမိုးခုံးအထိ၊ လေထဲအထိပင်လျှောက်လှမ်းပါ။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင် ၃၆၀ ဒီဂရီကြည့်ရှုရန်သင်နှင့်အထက်နှင့်သင့်အောက်ရှိပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
TOVP အကြောင်း SRILA PRABHUPADA ကိုးကား
ကျနော့်အကြံကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေကို Mayapur ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပါ။
ယခုဤတွင်အိန္ဒိယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောဝေဒ Planetarium ကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။ planetarium အတွင်း၌ Srimad Bhagavatam ၏ပဉ္စမ canto ၏စာသားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြီးမားသောအသေးစိတ်စကြာ ၀ universeာပုံစံကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ Planariarium အတွင်းတွင်မော်ဒယ်ကိုစက်လှေကားသုံးခြင်းဖြင့်အဆင့်အမျိုးမျိုးမှကြည့်ရှုသူများကလေ့လာပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား dioramas, charts, films စသည်တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်များရှိပွင့်လင်း verandah များပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
... ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဒ၏ဂြိုဟ်စနစ်ကိုဤရုပ် ၀ တ္ထုလောကအတွင်းနှင့်ရုပ်ဝတ္ထုများအပေါ်တွင်ပြသပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဒယဉ်ကျေးမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ပြသသွားမည်ဖြစ်ကာသူတို့သည်ဤကမ္ဘာသို့လာမည်။
27/2/1976 MAYAPUR - နံနက်ခင်းလမ်းလျှောက်
ယခုတွင်သင်တို့အားလုံးသည်ဤဝေဒ Planetarium ကိုအလွန်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ကြပြီးလူများကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရန်။ အဆိုပါ Srmad-Bhagavatam ၏ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်, သင်သည်ဤဝေဒ Planetarium ပြင်ဆင်ထားသည်။
15/6/1976 DETROIT - SRILA PRABHUPADA'S ROOM တွင်စကားပြော
ပြီးတော့ပေ ၃၅၀ အမြင့် Vedic Planetarium ကိုဆောက်လုပ်ဖို့ Mayapur မှာ350က ၃၅၀ မြေယာပေးဖို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါဟာအနည်းဆုံးရူပီးရှစ်ကုresေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအဲဒီမှာဂြိုလ်စနစ်, bhurloka, Goloka အားလုံးပြသကြလိမ့်မည် ...
12/4/1976 BOMBAY - နံနက်လမ်းလျှောက်
ရင်းမြစ် (ရန်ပုံငွေ) ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလှူငွေများကိုရရှိသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်ခွဲအားလုံးသည်ဝမ်းမြောက်စွာပါ ၀ င်ပံ့ပိုးပေးသွားမည်။ လက်တွေ့တွင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်အမှန်တကယ်ကုလသမဂ္ဂဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာတရားများ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Planetarium နှင့်မည်သည့်အရာများနေရာအနှံ့အပြားတွင်တည်ရှိသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်လူမျိုးရေးဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဝိညာဏဘဝ၏သိပ္ပံနည်းကျတင်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Mayapur မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုရှိသည်သွားကြသည်။ အစိုးရမှမြေ350က ၃၅၀ ကို ၀ ယ်ယူပြီး ၀ ိညာဉ်ရေးရာမြို့တစ်မြို့ကိုတည်ဆောက်ရမည်။ စီမံကိန်းများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာများသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ရှိနေသည်။ ယခု Caitanya Mahaprabhu အားကျေနပ်သောအခါ၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။
26/8/1976 နယူးဒေလီ - DINESH CANDRA SARKAR
တကယ်တော့ဒါဟာကမ္ဘာမှာထူးခြားတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ထိုကဲ့သို့သောအရာများမရှိပါ။ ငါတို့လုပ်ရမည်။ ပြီးတော့ပြတိုက်ကိုပြရုံသာမကဘဲလူတွေကိုအဲဒီအတွေးအခေါ်ကိုပညာပေးဖို့ပဲလိုတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကန်ထရိုက်တာကိုပေးမယ့်အစား Mayapur မှာအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်ဂျင်နီယာကအရာရာကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတာကိုကြည့်ပြီးအလုပ်သမားတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပထမတန်းစားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူပါ၊ ထို့နောက်ပထမတန်းစားအဆောက်အအုံရှိလိမ့်မည်။
စုပေါင်း PRABHUPADA ဒင်္ဂါးပြား
၁၂၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အိန္ဒိယအစိုးရ အထိမ်းအမှတ် Prabhupada ဒင်္ဂါးပြားကို TOVP မှယခုရနိုင်သည်။
TOVP MASTERPLAN ဗီဒီယို
ပြီးစီးခဲ့သော TOVP နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်3Dရိယာ၏လှပသော 3D ကာတွန်း။
TOVP - Ajay Piramal နှင့် Hema Malini တို့နှင့်အတူပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်း
TOVP သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကပြုလုပ်ခဲ့သောမြင့်မြတ်သောပရောဖက်ပြုချက်ကိုပြည့်စုံစေသည်။
TOVP THEME သီချင်း
Yamuna Jivana das ရေးသော TOVP Theme Song
TOVP Cosmic Chandelier ၏ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှု
TOVP - ကမ္ဘာ၏အနာဂတ်အောင်ပွဲ
မစ်ရှင် ၂၃ အသင်းအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်လှူဒါန်းပါ။
ငါနှလုံးသားအောက်ဆုံးမှအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကမ္ဘာတဝှမ်းအလှူရှင်များနှင့် TOVP ကိုထောက်ခံသူများ သူတို့သည်လွန်ခဲ့သောကိုးနှစ်တာကာလအတွင်း Srila Prabhupada ၏မစ်ရှင်နှင့် TOVP တို့အားသူတို့၏ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုနှင့်ချစ်မြတ်နိုးမှုတို့ဖြင့်ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ထာဝရကျေးဇူးတင်ပြီး Sridhama Mayapur သို့သင် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်မည်မှာသေချာသည်။ သင်သည်အပေါင်ထားရန်သို့မဟုတ်လှူဒါန်းခြင်းမပြုသေးပါကယခုအချိန်သည် Sridhama Mayapur နှင့် TOVP စီမံကိန်းနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်ယခုအချိန်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် Srila Prabhupada ၏အနိမ့်ဆုံးစီမံကိန်းကို Grand Opening တွင် ၂ နှစ်ကျန်ရှိသည်။ လုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ မစ်ရှင် ၂၃ မာရသွန်သည်အင်အားပြည့်နှက်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘုံရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီရန်အတွက်သင်၏အကူအညီကိုအရင်ထက်ပိုပြီးလိုအပ်နေပြီ။ လာမည့်နှစ်နှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်နှစ်စဉ် $10 သန်းနှင့်စုစုပေါင်း $15 သန်းလိုအပ်ပြီးစီမံကိန်းကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်စုစုပေါင်း $35 million လိုအပ်သည်။
လှူဒါန်းမှုအမျိုးအစား ၁၁ ခုအနက်တစ်ခုရွေးပါ
အခြားအဓိကဗိသုကာလက်ရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက TOPP အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်မှု
TOVP အမိုးခုံးသည်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိအခြားအမိုးခုံးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်နှင့်အကျယ်အမြင့်ဆုံးရှိသည်
ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
သီရိချက်တာယာမာဟာရာဘူမှ Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada၊ သူတော်စင်များနှင့်လူ့ဇာတိခံများ၊ ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း ကြီးမားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတွေးအခေါ်ကိုအမြဲတမ်း အသုံးပြု၍ မရသောဝေဒရိုးရာကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန်ထူးခြား။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
မြင့်မြတ်သောဂင်္ဂါမြစ်၏ကမ်းရိုးတန်းရှိသီရိမေယာပူ၏လွင်ပြင်မှမြင့်တက်လာသည် ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း ဘ ၀ ၏မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုရှာဖွေနေကြသောစိတ်အားထက်သန်သော ၀ ိညာဉ်ရေးသမားအားလုံးအတွက်အလင်းရောင်သဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤဗိမာန်တော်ကိုခေတ်သစ်လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက် ၀ ိညာဉ်ရေးရာသဘောပေါက်နားလည်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်မြင့်မြတ်သောဗိသုကာပညာနှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ရိုးရိုးလေးမြင်တာ ဗိမာန်တော်အပြင်ဘက် စိတ်ရိုးဖြောင့်သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်အားဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုနှိုးဆွပေးလိမ့်မည်။
ဗိမာန်တော်အတွင်းသို့ရွေ့လျားနေစဉ် the ည့်သည်သည်များစွာသောသူတို့ကိုအံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည် ဝေဒအနုပညာ, သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏သတင်းအချက်အလက်ပြသ.
ရှုပ်ထွေးသော၏အဓိကကျသောအကြောင်းရင်းမှာအဓိကဖြစ်သည် ဝေဒ Planetarium ၎င်းသည် visitors ည့်သည်များကို the ည့်သည်များအားစကြဝcreationာဖန်ဆင်းခြင်း၏ဒေသအသီးသီးသို့လည်ပတ်စေသည်။ နိမ့်ဂြိုလ် များမှစတင်၍ ဘုရားဖူးများသည်ကမ္ဘာ့စကြာဝthroughာကို ဖြတ်၍ ရုပ်ဝတ္ထုစကြာ ၀ ofာ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်။ မသွားမီပိုမိုမြင့်မားသောဂြိုလ်စနစ်များသို့သွားကြသည်။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်အတွင်းတွင် visitors ည့်သည်များသည်အမြင့်ဆုံးဝိညာဉ်ရေးရာသီရိခရိရှနာ၏အမြင့်ဆုံးဝိညာဉ်ရေးရာနေအိမ်သို့မရောက်မီ spiritual ည့်သည်များသည် ၀ ိညာဉ်ဆိုင်ရာဂြိုလ်အမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုကြသည်။
Vedic Planetarium တွင်rotရာမလှည့်ပတ်နေသောပုံစံတစ်ခုရှိပြီးဂြိုဟ်များ၏ရွေ့လျားမှုကိုပြသသည်။ Srimad-Bhagavatam။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၏မြင်နိုင်စကြဝtoာကိုက်ညီဘယ်လိုဖော်ပြရန်ရှင်းလင်းချက်နှင့်ပြသမှုကိုလည်းတင်ပြနေကြသည်။
အချိန်နှင့်အာကာသထက်ကျော်လွန်သောခရီး၊ ထာဝရကာလ၊ စစ်မှန်သောဗဟုသုတနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးရာပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများသို့ - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းသို့ကြိုဆိုပါ၏။
TOVP ONLINE လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် - ယနေ့လာရောက်ကြည့်ရှုပါ
Vedic Planetarium စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Temple သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဂူရူပူနင်မာ 2019 ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုဘုရားသခင့်အသွင်အပြင်နေ့တွင်သခင်ယေရှုအားပူဇော်သကာအဖြစ်ကြေငြာရန်အလွန်ဝမ်းသာသည်။ ရောင်းရန်လူကြိုက်များသည့်ပစ္စည်း ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်ဤအွန်လိုင်းနှင့်ဝယ်လိုအားရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစတိုးသည် TOVP သို့ပိုမိုသိရှိနားလည်ရန်၊
TOVP အကြောင်းဖောင်ဒေးရှင်း၏အမြင် - SRILA PRABHUPADA
Srila Prabhupada သည်ဗိမာန်တော်အတွက်ရှင်းလင်းသောရူပါရုံတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်ထူးခြားသောဝေဒ Planetarium ကိုဝေဒ၏ဘဝရှုထောင့်ကိုတင်ပြစေလိုခဲ့သည်။
သင်သည်စီမံကိန်းနှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ဖြစ်၊aည့်သည်အသစ်လားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီ site သည်သတင်းအချက်အလက်သာမကစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ Sri Mayapur Chandrodaya Mandir - Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း, Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ်၏နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ် ...
၁၉၇၂၊ မတ်လမှာငါတို့ပထမ ဦး ဆုံး ISKCON Gaura-Purnima ပွဲတော်ကို Sridham Mayapur တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဲဒီပွဲတော်အတွင်းမှာပဲ Radha-Madhava ဟာ Calcutta မှလာပြီးအစီအစဉ်ကို ဦး ဆောင်နေပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်ဘူဂျန် - ကူတာတစ် ဦး တည်းသာတည်ရှိသည်။
TOVP SAMADHI နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအရွယ်အစား
ဤသည်မှာ Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ချိန်ကပြီးစီးခဲ့သည့်အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားကိုပြသသည့် TOVP ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည် TOVP ဥယျာဉ်များအထက်ရှိအထူးတံတားတစ်စင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး ISKCON Mayapur စီမံကိန်း၏သရဖူရတနာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။